प्रधानमन्त्री पदका लागि मरिहत्ते गर्दिनँ [शेरबहादुर देउवा : नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता] – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१० कार्तिक २०७७, सोमबार ०१:२५ English
प्रधानमन्त्री पदका लागि मरिहत्ते गर्दिनँ [शेरबहादुर देउवा : नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता]
० मुलुकको समस्या जहाँको त्यहीँ रह्यो, तपाईं एक वरिष्ठ राजनीतिकर्मी भएको नाताले समाधानको कुनै उपाय सोच्नुभएको छ कि ?
– मैले सोचेका र भनेका कुरा लागु हुनै सकेनन् । मैले त संविधानका विषयमा पहिल्यै सहमति गरौँ, सहमतिअनुसार संविधान ड्राफ्ट गरौँ र संविधानसभा ब्युँताएर त्यसलाई घोषणा गरी अनि मात्र निर्वाचनमा जाउँ भनेको हो । तर मैले संविधानसभा पुनस्र्थापनको कुरा गरेँ भनेर शेरबहादुर त चुनावै चाहँदैन भनेर हौवा पिटाए । संविधान बनाएर चुनावमा जाने कि फेरि पनि संविधान बनाउन चुनावमा जाने भन्ने प्रश्नलाई सबैले गम्भीर रुपमा चिन्तन गरी निर्णयमा पुग्नु आवश्यक थियो । तर, हाम्रो पार्टीले पनि अब चुनावमै जाने भनी पास गरिसक्यो । अब त्यही मान्नुपरयो नि ।
० दुःख लाग्यो होला तपाईंलाई, होइन ?
– दुःख त लागिहाल्छ नि । भारतमा अंग्रेजहरुलाई हटाएको चार वर्षपछि नै स्थायी संविधान बन्यो, आज भारत कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, तर भारतभन्दा चार वर्षपछि स्वतन्त्र भएको देश नेपालमा अझै पनि स्थायी संविधानको टुंगो छैन भने दुःख लाग्नु त स्वभाविक नै छ नि ।
० बैशाखमा चुनाव गर्ने कुरा गरिएको छ, के आगामी बैशाखमा चुनाव हुनेमा तपाईं विश्वस्त हुनुहुन्छ रु
– यस विषयमा म केही भन्न सक्दिनँ । हाम्रो पार्टीको निर्णय त त्यही छ । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्रीबाट हटिदिए भने चुनाव त होला नि ।
० बाबुराम भट्टराई हटेनन् भने ?
– हट्लान् भन्ने नै लाग्छ मलाई त ।
० भट्टराई प्रधानमन्त्रीबाट किन हट्ने देउवाजी ?
– राष्ट्रिय सहमतिका लागि हटिदिने । उहाँले मंसिर ७ मा चुनाव गर्छु भनेर घोषणा गर्नुभयो तर गर्न सक्नुभएन, नैतिकताले उहाँलाई पिरोल्नुपर्ने हो ।
० आन्दोलन पनि छेड्नुभएको छ तपाईंहरुले, के आन्दोलनबाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सकिएला त ?
– जनताले साथ दिए भने हटाउन किन नसक्ने ?
० जनताले साथ देलान् त तपाईंहरुको आन्दोलनलाई ?
– किन नदिने रु प्रधानमन्त्रीकै कारण सबैले दुःख पाएको अवस्था छ, अनि जनताले साथ नदिने किन र?
० तपाईंलाई त आन्दोलनविरोध पनि भन्दारहेछन् नि, किन होला ?
– आन्दोलनको विरोधि भनेको के रु मैले सहमति चाहेँ, बढी सहमतिको कुरा गरेँ भनेर म आन्दोलनविरोधि भएँ ?
० तपाईंहरुको आन्दोलनको खास एजेण्डा के हो ?
– राष्ट्रिय सहमतिको सरकार स्थापना नै हाम्रो आन्दोलनको एजेण्डा हो ।
० नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने कुनै आधार छ तपाईंहरुसँग ?
– अन्य सबै पार्टीले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन स्वीकृति दिइसकेका छन्, अब त्यो एउटा माओवादी पार्टीले पनि मान्दिए त भैगो नि । बन्न नसक्ने अरु के कारण छ र ?
० अहिलेको स्थितिमा त बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बन्नुपर्छ भनिरहेका छन् नि प्रचण्डले त ?
– प्रचण्डजीले भन्दैमा अरुले पनि मान्नुपरयो नि ।
० बाबुरामजीकै नेतृत्वमा सरकारमा जान किन नहुने कांग्रेसले ?
– कसरी जाने रु हामीले त नजाने निर्णय गरिसक्यौँ नि । जेठदेखि नै हामीले ‘हट, तिमी हट’ भनेकोभन्यै छौँ भने अब उनैको नेतृत्वमा कसरी जाने सरकारमा ?
० त्यसोभए बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बन्न सक्दैन अब ?
– गाह्रो छ यो त ।
० कांग्रेसको नेतृत्वमा पनि सरकार बन्न सकेन भने के गर्ने नि ?
– अहिलेदेखि नै किन बन्न नसक्ने कुरा गर्ने ? बन्न सकेन भने त्यतिबेलै सोचिन्छ नि के गर्ने भनेर त ।
० कांग्रेसकै नेतृत्वमा बन्ने भयो रे लौ, त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीचाहिँ कसलाई बनाउने नि र?
– कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री को बन्ला भन्ने चिन्ता कसैले लिनु पर्दैन, त्यतिबेला एक घण्टामै हामी निर्णय गर्नेछौँ ।
० तपाईं आफै दाबी नगर्ने र?
– मैले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको छैन, अर्थात् म नै हुनुपर्छ भन्ने होइन ।
० कांग्रेसबाट हुँदा शेरबहादुर देउवा हुनुपर्छ भनेका छन् नि प्रचण्डजीहरुले त ?
– खै मलाई त भनेका छैनन् त्यो कुरा ।
० सबै दलहरुले तपाईंलाई नै आग्रह गरे पनि नबन्ने त र?
– शेरबहादुर देउवा सहमतिको बाटोमा बाधक बन्न चाहँदैन भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु परयो । म प्रधानमन्त्रीको लागि लालायित छैन । पार्टीभित्र पनि म बाधक बन्न चाहन्न । तर, शेरबहादुर नै चाहिने अवस्था आएछ भने पछि हट्ने व्यक्ति पनि होइन म ।
० तपाईंले सभापति सुशील कोइरालालाई असहयोग गर्नुभयो पनि भनिन्छ नि र?
– छैन–छैन, असहयोग गरेकै छैन । अरुले आरोप लगाएका मात्र हुन् ।
९ मंसिर २०६९, शनिबार ०८:१५ मा प्रकाशित